५ यस्तो स्थिति जसलाई यौन सम्पर्कले आफू अनुकुल बनाउँछ | सुदुरपश्चिम खबर
केही कारणहरूले गर्दा तपाईं नियमित जिम जान सक्नु भएको छैन वा बिहानको पैदल यात्रामा निस्कने फुर्सद पनि पाउनु भएको छैन भने के गर्ने ? त्यसको उपयुक्त विकल्प के होला ? यस्तो अवस्थामा यौन सम्पर्कले पनि व्यायामको काम गर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । धेरैतिर पढ्न पाइन्छ यौन सम्पर्कपछि शरीरमा धेरै क्यालोरी खपत हुने गर्छ । त्यसैले कुदेर सडकमा पसिना बगाउने वा जिमखानामा पसिना बगाउनु जस्तै ओछ्यानमा पसिना बगाउनु पनि स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक हुने गर्छ । अनलाइनखबर बाट सभार